Haweenka gobolka Banaadir oo Deeq Taakuleyn ah ku wareejiyey Ciidanka Xoogga ee furinta hore ku jira. -
HomeWararkaHaweenka gobolka Banaadir oo Deeq Taakuleyn ah ku wareejiyey Ciidanka Xoogga ee furinta hore ku jira.
Haweenka gobolka Banaadir oo Deeq Taakuleyn ah ku wareejiyey Ciidanka Xoogga ee furinta hore ku jira.
April 10, 2019 F.G Wararka 0
Sahaydaan loogu talo galay Ciidanka qalabka sida ee Howlagalada ka wada Qaar kamid ah Gobolada dalka, gaar ahaan kuwa la wareegay deegaanada Sabiib iyo Caanoole ee Gobolka Shabeelada Hoose ayaa isugu jira Hilib, Kalluun, Buskut, Sabaayad iyo Biyo, Taasi oo Haweenka ku nool Caasimada Somaliya.
Haweenka soo Arruuriyey Sahaydaan oo loogu magac daray Taageerada Muwaadinka ee Ciidanka Qalabka sida oo aragtideeda ay laheyd marwo batuulo sheekh Axmed gaballe ayaa sheegay in Haweenka Muqdisho ay go’aansadeen inay is garab taagaan Ciidanka qalabka sida.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamed Baarqab ayaa sheegtay inay u taagan yihiin Dhiiri-gelinta iyo Taageerada Ciidanka qalabka iyadoo xustay in ay ka go’an tahay inay garab u noqdaan ciidanka
iyaddoo Sahaydii Haweenkaan ay ugu talo galeen Ciidanka lagu wareejiyey Taliyaha Hoggaanka Ciidanka Xoogga dalka.